Amasiko aseFrance - Amasiko agxile kakhulu | Ukuhamba kwe-Absolut
USusana godoy | | EFrance
Izwe ngalinye linamasiko alo futhi kuyinto sonke esithanda ukuyazi, ukuthi siyayivakashela noma cha. Ngakho-ke, namuhla sekuyithuba le- Amasiko aseFrance, okungezona ezimbalwa futhi sizozama ukufingqa ezinye zezinto ezivame kakhulu. Ngaphandle kokungabaza, siyakuqinisekisa ukuthi eziningi zazo zizokumangaza.
Kukhona konke ukuthanda futhi ezinye zalezi zinkambiso zaseFrance ziyafana nezinye esizaziyo, yize ngayinye inesitembu sayo. Ukujwayela kancane ngalo lonke lolu siko futhi cwilisa amasiko, akukho okufana nokuqhubeka nokufunda futhi uzitholele.
1 Ukuvakasha kuhlala kwaziswa kusengaphambili
2 Sikufisela inhlanhla nama-crepes
3 Amasiko eFrance, sekudlule imizuzu eyi-15 kuphela
4 Ukuqabula okuthathu njengesibingelelo
5 Isidlo sakusihlwa, isidlo esibaluleke kakhulu sosuku
6 Amahlaya adluliselwa enyangeni ka-Ephreli
7 Isobho lika-anyanisi
Ukuvakasha kuhlala kwaziswa kusengaphambili
Uma isinyathelo sokuqala ozosithatha ukuya kuso vakashela othile eFrance, bese ukhumbula leli siko. Kufanele uxwayise kusengaphambili, lokho kwezimanga kule ndawo, abakuthathi kahle nhlobo. Kuthiwa lokhu kungenxa yokuthi, njengokujwayelekile, bathambekele ekubeni ngabantu abahleleke kakhulu. Ngakho-ke, lapho benezivakashi bazobanakekela ngendlela engakaze ibonwe ngaphambili kepha njalo ngenhlangano yangaphambilini. Kepha noma kuyindlu yesihlobo, kufanele wazise njalo. Ngaphezu kokuhamba nemininingwane efana nebhodlela lewayini futhi uma bekunikeza ukudla, engeza izichasiso ezithandekayo eziya kuyo futhi, nakumpheki noma umphathi. Amasiko aseFrance okufanele alandelwe eduze.
Sikufisela inhlanhla nama-crepes
Vele, ngale ndlela, i-priori, asikwazi ukusho ukuthi iyiphi inhlanhla nokwenza ama-crepes ekhishini okuhlobene nayo. Yebo, kungenye yamasiko aseFrance. Kwenzeka ekuqaleni kukaFebhuwari, lapho ama-crepes enziwe. Ngenkathi zenziwa epanini, isiko lithi kufanele ziphonswe emoyeni ukuze zijike. Kepha uma isivele inenkinga yayo, lokhu kwenziwa ngesandla esisodwa esibambe ipani kwesinye, imali. Lokhu sizokuthola esandleni sobunxele. Njengoba ngalesi senzo baqinisekisa inhlanhla ezinyangeni ezilandelayo.
Amasiko eFrance, sekudlule imizuzu eyi-15 kuphela
Lokho kwe ukufika sekwephuzile kubonakala njengokungahloniphi ezindaweni eziningi. Kepha kunabantu abaphuzile vele sebephelelwe umkhuba. EFrance, imizuzu engafika kwengu-15 kungathathwa njengokuthethelelwa, kepha hhayi umzuzu ubude. Ngoba uma kungokwesidlo, lapho-ke ngeke kube khona ukubambezeleka okungenzeka ngoba ukugcina isikhathi kuyadingeka njalo futhi wonke umuntu uvame ukulihlonipha leli phuzu. Ngakho-ke uma wephuzile ukuqokwa kwalolu hlobo, bazokuthola ngobuso bezimo.
Ukuqabula okuthathu njengesibingelelo
Kuyiqiniso ukuthi lokhu kuncike kakhulu endaweni ongayivakashela. Kepha elinye lamasiko aseFrance lisekubingelelweni. Kwezinye izingxenye zejografi yayo kunikezwa ukwanga okuthathu okunikezwayo. Ikakhulu lapho sikhuluma ngezikhathi ezingekho emthethweni. Lolu hlobo lokuqabula luqala esihlathini sobunxele futhi hhayi ngakwesokudla njengoba sijwayele. Vele, esimeni esihlelekile ngokwengeziwe, ukubingelela kuzogxila ekuxhawulaneni.
Isidlo sakusihlwa, isidlo esibaluleke kakhulu sosuku
Sihlale sizwa ukuthi ukudla kwasekuseni bekuyisidlo esibaluleke kakhulu. Ngoba kuliqiniso ukuthi kungukuqala kosuku nokuthi sidinga ukugcwalisa amabhethri. Kepha kulokhu, siyahamba ntambama ukuze sikhulume ngalokhu kubaluleka. Iqiniso ukuthi lapha sikhuluma ngokubalulekile ngenxa yokuthi ukwazi ukuhlanganisa umndeni kabusha. Ngesikhathi sokudla umndeni wonke uhlala ndawonye futhi bakhulume ngakho konke okwenzekile usuku lonke. Ngakho-ke, ngesinye sezikhathi ezilindelwe kakhulu nokuthi ngokuvamile akuxolelwa. Izingxoxo kanye newayini kuvame ukuba khona.
Amahlaya adluliselwa enyangeni ka-Ephreli
Sine 'Abangcwele Abangenacala' ekupheleni kukaDisemba. Kodwa kwamanye amazwe afana neFrance, amahlaya asevele eqala ngo-Ephreli. Kuyaziwa ngokuthi yi-'Poisson d´avril 'futhi kugujwa nge-1 yaleyo nyanga. Ihlaya livame ukubekelwa amalungu omndeni nabangane abaseduze. Kungaba uhlobo oluthile lwezindaba ezingamanga futhi kubo bonke labo abakholwayo, inhlanzi eyiphepha ibhajwe emhlane wabo. Isiko eselisabalele nakwamanye amazwe, lapho sazi khona ukuthi i-April Fool's Day.
Un isidlo esijwayelekile Ifaka inkanyezi anyanisi we-caramelized. Ngaphandle kokungabaza, ubumnandi nokuningi, emishadweni. Njengoba kuyisitsha esikhonzwa kubo, kepha lapho umcimbi usuzophela, njengamandla okuqhubeka nephathi. Kuyinto iresiphi endala impela, eyenza iqhubeke nesiko, nasekhishini. Kuthiwa inomsuka wayo eNkathini Ephakathi kodwa yaba yimpumelelo enkulu lapho bekuwukuphela kwesitsha esishisayo esidliwa entathakusa kwezinye izindawo zokucima ukoma.
Indlela ephelele ye-athikili: Ukuhamba kwe-Absolut » Amasiko aseFrance